के यो’नीको आकारले यौ’न सन्तुष्टिमा फरक पर्छ ? |
Home अन्य के यो’नीको आकारले यौ’न सन्तुष्टिमा फरक पर्छ ?
व्यक्तिपिच्छे मानिसको अनुहार आकारप्रकार फरक फरक हुने गर्छ । सबै मानिसहरुको आकारप्रकार र रुप एकै हुने गर्दैन ।
ठीक यही कुरा यो’नी अर्थात् महिलाका प्रजनन अंगको मुख्य भागको हकमा पनि लागू हुन्छ । महिलाको यो’नीको आकारले के फरक पर्छ ? यो युगौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । यो प्रश्नबारे बढी चासो राख्नेहरुमा पुरुष रहने गर्छन् तर स्वयं महिलाको हकमा पनि यो कुरा कम चासोको विषय चाहिँ होइन ।